Mgbatị olu - mmega ahụ ndị ị kwesịrị ịma | Bezzia
Susana godoy | 14/09/2021 16:00 | Mmega ahụ
Taa karịa ọzụzụ n'onwe ya, anyị ga -ahapụ ka ọtụtụ usoro buru anyị olu omume ma ọ bụ gbatịa. N'ihi na dịka anyị maara nke ọma, ọ bụ otu n'ime mpaghara kachasị mgbagwoju anya, nke nwere ike ịta oke ahụhụ. Olu mgbu ma ọ bụ ọbụna isi ọwụwa n'ihi nke a bụ usoro nke ụbọchị na ndụ anyị.
Yabụ, ọ bụrụ na ọ dị n'aka anyị igbochi ma ọ bụ meziwanye ha, ọ nweghị ihe ka mma. Ya mere, anyị ga -eburu n'uche na enwere usoro mmega ahụ nke anyị ga -enwe ike belata olu n'olu. Ebe ọ bụ na nsogbu ụfọdụ nke cervical metụtara nkwekọrịta. Anyị ga -amalite?
1 N'olu elu na -agbatị
2 Isi dị nro na -atụgharị
3 Ọ na -agbatị olu ma na -agba agba
4 Ọ dịkwa mkpa ka agbatị ọkpụkpụ azụ
N'olu elu na -agbatị
Ihe omumu a bụ otu ama ama na mgbakwunye, anyị nwekwara ike ịhụ ya n'ụdị dị iche iche. Otu n'ime ha bụ na anyị nwere ike ịme ya ịnọdụ ala, na -ahapụ ogwe aka ala na ubu kwa. Ọ bụrụ na anyị na -eme ntakịrị ike n'ebe abụọ a, ọ ka mma. N'oge ahụ ị kwesịrị ịtughari olu gị n'akụkụ, dị ka a ga -asị na ntị gị chọrọ imetụ ubu aka. Ọ dị mkpa ka ị ghara ịmanye onwe gị ma na ị ga -eme mmega ahụ nwayọ. Ị ga -eme ya n'akụkụ aka nri wee gaa n'aka ekpe ma ọ bụ na nke ọzọ.
N'ezie Ọdịiche ọzọ nke ịgbatị ndị a maka olu bụ iji aka mee ya.. Kama ịhapụ ogwe aka ala, anyị na -ejide isi na aka anyị n'akụkụ ebe anyị chọrọ ịgbatị. Mgbe ahụ anyị ga -anọ sekọnd ole na ole ka nke a gbanwee n'akụkụ nke ọzọ. Ejikwala aka gị mee nnukwu nrụgide, ọ na -enye aka.
Isi dị nro na -atụgharị
Anyị nwekwara ike iji nke a dochie mgbatị ahụ ma ọ bụ ịgbatị aka maka olu n'elu. Ọ dị mfe n'ihi na ị nwere nhọrọ nke inwe ike ịme ya ma ịnọdụ ala ma guzoro. N'ọnọdụ abụọ ahụ, ọnọdụ mbido yiri nke ahụ n'ihi na ọ dị anyị mkpa ịnwe ogwe aka anyị ala na ubu anyị. Ozugbo dị njikere, ọ bụ oge ịkwanye isi gị. Nke ahụ bụ, anyị ga -atụgharị n'otu akụkụ wee gafee n'akụkụ nke ọzọ. Ihe a niile na nwayọ iji zere isi ọwụwa. Ọ bụ ụzọ zuru oke iji gbalite akwara nke mpaghara trapezius.
Ọ na -agbatị olu ma na -agba agba
Kedu ka ọ ga -esi dị obere, anyị na -eche mmega ahụ ọzọ kachasị mfe ịme. Ọ bụ maka idobe ahụ kwụ ọtọ, ya bụ, akụkụ obi enweghị ike imegharị. Site n'ebe ahụ, ihe ga -agagharị bụ olu na agba. N'ihi na anyị ga -eme mmegharị olu n'ihu. Anyị na -eche na anyị nwere olu rọba ma anyị chọrọ ịgbatị ya ka o kwere mee, mana ọ bụghị ala. Kpachara anya ka ị ghara imegharị ahụ gị niile. Mgbe anyị gbatịrị ya, oge eruola iburu olu ahụ, anyị ga -eme ya azụ na -ahapụ ikwe ka ọ rapara na ya.
Ọ dịkwa mkpa ka agbatị ọkpụkpụ azụ
Ọ bụ ezie na anyị na -elekwasị anya n'akụkụ olu, ọ bụ eziokwu na ọkpụkpụ azụ dịkwa n'otu ma chọọ ka anyị buru ya n'uche. Enwere ọtụtụ mmega ahụ anyị nwere ike imere ya, mana na nke a ihe anyị ga -anwale bụ na mmegharị ahụ dị n'otu ma haziekwa maka olu anyị. Yabụ, ị ga -enwerịrị kwụ ọtọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, dị ka a ga -asị na eri na -amịrị gị isi elu. N'okwu a anyị chọrọ gbatịa azụ na olu mana ihe niile na -enweghị amanye, n'agbanyeghị na anyị nwere ike ime nke ọma. Mgbe ahụ anyị na -ezu ike wee laghachi n'ọnọdụ mbụ. Olu ga -aga kwụ ọtọ na maka nke ahụ, agba na -agbada ntakịrị dị ka a ga -asị na ịchọrọ akara agba abụọ. Ị nwetara ya? Mgbe ahụ mee ọtụtụ ugboro ugboro, ị ga -ahụ mgbanwe ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Mmega ahụ » Mmega ahụ na agbatị maka olu